သင်သည်ကမန်ကျွန်းစုများတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
ကေမန်ကျွန်းများတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကေမန်ကျွန်းများတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကေမန်ကျွန်းများတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကေမန်ကျွန်းများရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကေမန်ကျွန်းများရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ကဲ့သို့ကမန်ကျွန်းများတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့လည်းပေးသည်။ Cayman Islands တွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများပါ ၀ င်ခြင်း။
Cayman Islands Company Formation ကိုဘယ်လိုကူညီမလဲ။
ပြုလုပ်သူသန်းချီသောကမန်ကျွန်းများသည်ကမန်ကျွန်းများနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်ဖောက်သည်များအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
Cayman ကျွန်းရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်တည်နေရာများနှင့်ကေမန်ကျွန်းစုမှလွတ်လပ်သောဇုန်တည်ထောင်ခြင်းအတွက်ကမန်ကျွန်းများတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
Cayman Islands တွင်လိုအပ်သောသင်၏ကုမ္ပဏီတွင် Cayman Islands တွင်ဘဏ်အကောင့်ရှိပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်သင်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်လိုအပ်ရင်။
Cayman ကျွန်းများတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းပစ္စည်းများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ပေးပို့ခြင်း။
Cayman ကျွန်းများနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ။
ကေးမန်ကျွန်းများနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဖြေရှာမှုများ၊ ကမန်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကေမန်ကျွန်းစုအတွက်ဘဏ်စာရင်း၊ ကေမန်ကျွန်းများအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ကေးမန်ကျွန်းစုအတွက် Virtual နံပါတ်၊ ကေမန်ကျွန်းများအတွက် CRM Solutions၊ , Cayman ကျွန်းများနှင့်နိုင်ငံပေါင်း 109 အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့်အများကြီးပို။
သင်၏အစုရှယ်ယာအမည်ဖြင့်သင်၏ Cayman Islands Company Limited ကိုရယူပါ။
အစုရှယ်ယာအမည်ဖြင့်သင်၏ Cayman Islands Company Limited ကိုရှာဖွေပါ
Cayman ကျွန်းများသည်ကျွန်း ၃ ကျွန်းပါဝင်သည်။ Grand Cayman, Cayman Brac နှင့် Little Cayman ။ အကြီးမားဆုံးဖြစ်သော Grand Cayman သည်နာမည်ကျော် Vibe၊ အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်ကဖေးများ၊ စာရင်းကျဆင်းမှုနှင့်ကျော်ကြားသော ၇ မိုင်ကမ်းခြေရှိသည်။ Cayman Brac သည်သဘာဝချစ်မြတ်နိုးရသူများ၏ပရဒိသုဥယျာဉ်တစ်ခုလုံး၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလှည့်ကွက်များနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောလမ်းလျှောက်ခြင်း၏ပရဒိသုဖြစ်သည်။ Little Cayman ကျွန်းသည်လူ ၁၅၀ သာနေထိုင်သည်။ best ည့်သည်များသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအကန့်အသတ်ဖြစ်သည့် Bloody Bay Wall ဟုခေါ်သည့်လေကြောင်းနှင့်ခုန်ချခြင်းများကိုနှစ်သက်ကြသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၂.၅ သန်းခန့်သည်ကေမန်ကျွန်းသို့လည်ပတ်ကြသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခရီးသွားများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့နှစ် ဦး သည်နာရီပေါင်းများစွာစျေးဝယ်ထွက်ခြင်း၊ နေပူခြင်း၊ ဆိပ်ကမ်းသို့မထွက်ခွာမီစတီယာရင်နှင့်ရေကူးခြင်းများပြုလုပ်ကြသည်။ အခြားသူများက Seven Mile သဲသောင်ပြင်အနီးတွင်တူးကြသည်။ ၎င်းတို့သည်ကာရစ်ဘီယံ၏ချစ်စရာအကောင်းဆုံးသဲသောင်ပြင်များထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ကံကောင်းထောက်မစွာနောက်ထပ်မည်သည့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဓိကအာရုံစိုက်မှုတစ်ခုနှင့်ထင်ရှားသောအကဲဖြတ်ခိုလှုံခွင့်တစ်ခုဖြစ်သည့်ကာရစ်ဘီယံရှိဗြိတိန်နိုင်ငံခြားဒေသ၌၎င်းသည်တစ် ဦး ချင်းစီထက်စာရင်စာရင်းသွင်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများပိုမိုရှိသည်။
၁၉၇၂ တွင်ပိုမိုထင်ရှားသောလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ကျွန်းများသည် ၂၀၀၉ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်တွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အဆင့်တိုးမြှင့်ခဲ့သော်လည်း၎င်း၏ပထမဆုံး ဦး ဆောင်သူဖြစ်သောမက်ကီဗာဘုရှ်အား ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်အဂတိလိုက်စားမှုကြောင့်နှင်ထုတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဥပဒေပြုသူများ၊ စူပါစတားများ၊ ကော်ပိုရိတ်မိကျောင်းသတ္တဝါများနှင့်စီးပွားရေးရှေ့ဆောင်များ၏ဘဏ္budgetaryာငွေရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုဖော်ထုတ်သည့်ပရဒိသုစာတမ်းများကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်ချိုးဖောက်မှုတွင်ကျွန်းများမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
ကေးမန်းကျွန်းများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးသောခိုလှုံခွင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအများစုနှင့်မတူဘဲကေးမန်လူမျိုးများတွင်ကော်ပိုရိတ်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ကမ္ဘာချီမိတ်ဖက်များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏လစာအနည်းငယ်ကိုသို့မဟုတ်အခကြေးငွေများကိုအခွန်အကောက်မှကာကွယ်ရန်အရန်ပစ္စည်းများကိုအခြေခံသည်။
ကော်ပိုရိတ်တာ ၀ န်မရှိပါကကေမန်ကျွန်းစုသည်နေထိုင်သူများအပေါ်တိုက်ရိုက်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ၎င်းတို့တွင်ကိုယ်ပိုင်စရိတ်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ၊ အရင်းအနှီးများပြားလာသည့်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ၊ သူတို့ကဒီထုံးစံ၌တာဝန်ဘက်မလိုက်စဉ်းစားနေကြသည်။
တိုက်ရိုက်အခွန်အကဲဖြတ်မှုမှတစ်ဆင့် ၀ င်ငွေကိုဝယ်ယူမည့်အစားခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်သောထောက်ပံ့ငွေများ၊ ငွေကြေးနှင့်ပတ်သတ်သောလဲလှယ်မှုများနှင့်သွင်းကုန်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောအခကြေးငွေများဖြင့်ကေမန်လူမျိုးများသည် ၀ င်ငွေကိုရရှိသည်။ Caymans သို့တင်သွင်းသောကုန်ပစ္စည်းအများစုအပေါ်တာဝန်ယူခမှာ ၂၂% မှ ၂၇% အထိရှိသည်။ ဥပမာအရာ၊ ကလေးစာရွက်နည်းနည်းသည်တာ ၀ န်ခံခများမှကင်းလွတ်သည်။ မတူညီသောကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဥပမာကားများ၊ ကား၏ခန့်မှန်းမှုပေါ် မူတည်၍ ပိုမိုမြင့်မားသောနှုန်းဖြင့်ကောက်ခံသည်။ အကုန်အကျများသောယာဉ်များအတွက်တာဝန်ခံခနှုန်းသည် ၄၂% အထိမြင့်နိုင်သည်။
Caymans သည်အမေရိကန်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီနှင့်ကြီးမားသောကမ္ဘာ့ကုမ္ပဏီများအကြားတွင်ကျော်ကြားသောကုန်ကျစရိတ်ခိုလှုံခွင့်တစ်ခုဖြစ်လာသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်း၏ဒေသပြင်ပတွင် ၀ င်ငွေအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ်နှစ်စဉ်တာဝန်မရှိပါ။ ၎င်းတွင်လုပ်ငန်းမှရရှိသော ၀ င်ငွေသို့မဟုတ်အမြတ်အစွန်းများပါ ၀ င်ခြင်းကြောင့်ကေးမန်းလူမျိုးများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒါရိုက်တာများအကြားတွင်အထူးသဖြင့်နာမည်ကြီးစေသည်။
စွဲချက်တင်မည့်အစား၊ ပင်လယ်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များသည်နှစ်စဉ်ခွင့်ပြုစရိတ်များကိုဥပဒေပြုလွှတ်တော်သို့ချက်ချင်းပေးဆောင်သည်။ ၄ င်းသည်အဖွဲ့အစည်း၏ခွင့်ပြုချက်အတိုင်းအတာအပေါ်မူတည်သည်။ အကုန်အကျများသောသန့်ရှင်းရာဌာနများကဲ့သို့လုံခြုံရေးဥပဒေများသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကေးမန်းလူမျိုးများအနေဖြင့်လူများနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်သူတို့၏အရင်းအမြစ်များနှင့်စရိုက်လက္ခဏာများကိုမမြင်ရသောမျက်စိမှကာကွယ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကေမန်ကျွန်းများဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ကေမန်ကျွန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ကေးမန်ကျွန်းများတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်ကေမန်ကျွန်းများသို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။
Cayman ကျွန်းများရှိ Company Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ကေမန်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများကိုအစမှအဆုံးသတ်ရန်နှင့်သင်၏နေရာလွတ်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သောနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းခြင်းအတွက်ကူညီခြင်း၊ ကေမန်ကျွန်းစုရှိရုံးခန်း၊ ကေမန်ကျွန်းစုရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ကိန်းမန်းအရေအတွက်အတက်အကျ၊ ကေမန်ကျွန်းစုရှိစီးပွားရေးတိုးချဲ့မှု၊ ကေမန်ကျွန်းစုရှိတရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကေမန်ကျွန်းများတွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံခြင်း၊ ကေးမန်ကျွန်းစုများတွင်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ကေမန်ကျွန်းရှိ CRM Solutions၊ Cayman ကုန်သည်များ ကေမန်ကျွန်းများသို့ငွေပေးချေခြင်းတံခါး၊ ငွေကြေးအရင်းအနှီးထောက်ပံ့ခြင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာဘဏ္financingာငွေ၊ လုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာခြင်း၊ ကေမန်ကျွန်းစုရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ ကေမန်ကျွန်းစုရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကေမန်ကျွန်းစုရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Cayman ကျွန်းများရှိဖွံ့ဖြိုးမှု၊ Cayman Is တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း တတ်နိုင်ခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများမှာအနည်းငယ်အမည်များမှနိုင်ငံများ။
Cayman Islands တွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် - Cayman Islands နှင့် Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Cayman Islands မှ Offshore Bank Account အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပံ့ပိုးပေးသည်။ ထို့အပြင်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုရှိသောကျွမ်းကျင်သော ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောကျွမ်းကျင်သည့်လုပ်သားများအားကေမန်ကျွန်းများသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ကူညီခြင်း၊ ကေမန်ကျွန်းစုရှိကုန်သွယ်မှုနှင့် ၀ ယ်ခြင်းဝယ်ယူမှု၊ ကေမန်ကျွန်းစုရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကေမန်ကျွန်းစုရှိ virtual နံပါတ်များ၊ ကေးမန်ကျွန်းများတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချဲ့ထွင်ခြင်း၊ ကေမန်ကျွန်းများရှိတရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကေမန်ကျွန်းများရှိစီးပွားရေးအတွက်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ Cayman Islands တွင် CRM Solutions၊ Merchant Account နှင့်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ Cayman Islands တွင်ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် Cayman Islands တွင်လည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ၊ Cayman Islands တွင်လုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာမှုရှိခြင်း၊ ကေမန်ကျွန်းစုရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ Cayman Islands တွင် Development, Cayman ရှိ Apps များတည်ဆောက်ခြင်း နိုင်ငံများ၊ ကေမန်ကျွန်းစုရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ကေမန်ကျွန်းများရှိဆော့ဝဲလ်တီထွင်မှုနှင့်ကေးမန်ကျွန်းစုရှိဘလောက်ချိန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအနည်းငယ်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောစျေးနှုန်းများဖြင့်ဖော်ပြရန်။
ကေမန်ကျွန်းစုအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Cayman ကျွန်းများအတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့က Cayman ကျွန်းများနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းထားသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကိုပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြီးမားဆုံးထဲက ၁ ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်မှန်တယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီခြင်း၊ စီးပွားရေးပမာဏအတိုင်းအတာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကေမန်ကျွန်းများတွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် Cayman ကျွန်းများအတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ကေမန်ကျွန်းစု (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ကေမန်ကျွန်းစု (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ကေမန်ကျွန်းစု
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ကေမန်ကျွန်းစု
Cayman Islands Business Company အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများကေမန်ကျွန်းစု
Cayman Islands Business Company အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
Cayman Islands BUSINESS COMPANY အတွက်အမည်စာရင်းသွင်းခြင်း
Cayman Islands Offshore Company အတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Logo စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း Cayman Islands
Cayman Islands ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / အစုရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
Cayman Islands Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်များတိုးမြှင့်ခြင်း
Cayman Islands စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်စာရွက်စာတမ်းများ Apostille
Cayman Islands Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်သံရုံးမှတရားဝင်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီအတွက် Chop and Seal Cayman ကျွန်းများ
Cayman Islands တွင်နောက်ထပ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိတ်ပါ
Cayman Islands တွင်ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပြပါ
●အစုရှယ်ယာကေမန်ကျွန်းစုမှကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်ခ (၁၆ နှစ်) - ဒေါ်လာ ၁၆၅၀
●ကေမန်ကျွန်းစု၌ကုမ္ပဏီများပါဝင်မှုအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၁၅၀၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ)
● Cayman ကျွန်းရှိအစုရှယ်ယာများကကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အတူတင်သွင်းခြင်း
●ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် Cayman ကျွန်းရှိအစုရှယ်ယာများဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်စံပြအဖွဲ့လိုက်စာရွက်စာတမ်းများ၊ အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဆုံးဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ။
Cayman ကျွန်းများတွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်ဒေသတွင်းအရင်းအမြစ်များကိုသင့်အနီးကပ်သယ်ဆောင်ရန်အခမဲ့အကြံဥာဏ်ကိုလည်းပေးသည်။ သင်သည် Cayman ကျွန်းများသို့မဟုတ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
အစုရှယ်ယာကေမန်ကျွန်းစုမှကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
အစုရှယ်ယာအားဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Cayman ကျွန်းများတွင် Miller Makers မှတဆင့်ပြုလုပ်သည်
အကယ်၍ သင်သည်ကေမန်ကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကေမန်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ကေမန်ကျွန်းကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မည်ပုံမှတ်ပုံတင်ရမည်ကိုရှင်းလင်းစွာ၊ Cayman ကျွန်းများရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်ကေးမန်းကျွန်းရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ကေမန်ကျွန်းရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကေးမန်ကျွန်းစုရှိဖောက်သည်များနှင့်ကေမန်ကျွန်းများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ရက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်သည်ကမန်ကျွန်းများရှိကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်သင်ကံမန်ကျွန်းစုမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်ပါကကူညီလိမ့်မည်။ Cayman ကျွန်းများတွင်ဖွဲ့စည်းသောကုမ္ပဏီများအတွက်၊ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ကေးမန်ကျွန်းတွင်ပါဝင်သည်။ သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်ကေမန်ကျွန်းများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ကကမန်ကျွန်းများတွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့ဖူးသည့်အကူအညီများပါ ၀ င်သည်။ လျှောက်ထားချင်တယ် ကေမန်ကျွန်းစုနေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
Cayman ကျွန်းများရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကေမန်ကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ ကေမန်ကျွန်းစု ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် ကေမန်ကျွန်းစု.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Cayman ကျွန်းများတွင်မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့် Cayman ကျွန်းများရှိတတ်နိုင်သည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ကိုပေးပါသည်။ Cayman Islands ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Cayman Islands ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ Cayman ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများနှင့်သင်၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်ကိုအရေးပါသည်။ ကေမန်ကျွန်းစုရှိဝန်ဆောင်မှုများ။
Cayman Islands တွင်အစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ -
Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အမြားကိုကမန်ကျွန်းများအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှပင်ကမ်းလှမ်းသည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကေးမန်ကျွန်းများနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးတိုင်စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောလျှင်မှန်ကန်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အတိုင်းအတာတစ်ခုအရကျွန်ုပ်တို့သည်“ ကေမန်ကျွန်းစုရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် Cayman ကျွန်းများအတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
Cayman ကျွန်းရှိအစုရှယ်ယာများအားဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် -
Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စာရွက်စာတမ်းပြင်ဆင်ခြင်း။
Cayman ကျွန်းရှိရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
Cayman ကျွန်းရှိအစုရှယ်ယာများကကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်အသင်း၏စာချွန်လွှာနှင့်စာတမ်းများ / ။
ကေမန်ကျွန်းစုရှိအစုရှယ်ယာများဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်ဝေမျှလက်မှတ် / လက်မှတ်စာအုပ်။
Cayman Islands တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအစုရှယ်ယာများဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလက်မှတ်။
Cayman Islands ရှိအစုရှယ်ယာများအားဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါကမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။
မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ရုံး၊ မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါက Cayman ကျွန်းရှိအစုရှယ်ယာများကုမ္ပဏီလီမိတက် / ။
Cayman ကျွန်းများတွင်အစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ /
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ Cayman ကျွန်းရှိအစုရှယ်ယာများအားဖြင့်လီမိတက်က
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သင်သည်ကေးမန်ကျွန်းများတွင်လိုင်စင်မလိုပဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကခွင့်ပြုထားသည့်ကမန်ကျွန်းများတွင်ခွင့်ပြုချက်ပြုပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည်လိုင်စင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆက်နွှယ်သောကေးမန်းကျွန်းများတွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: လောင်းကစား၊ လောင်းကစား၊ ထီ၊ အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်း၊ ကာယန်ကျွန်းများတွင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ ကေမန်ကျွန်းစုရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ကေမန်ကျွန်းရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ ဘဏ္andာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံဆင်းသက်လာသောတူရိယာများ၊ Cayman Islands တွင် Cayman Islands တွင်ငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကေမန်ကျွန်းများတွင်လုံခြုံသောထိန်းသိမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ။
Cayman ကျွန်းရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ချထားမှုအတွက်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ကမန်ကျွန်းများနှင့် "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" တွင်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းနှင့်ချီသောထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သည့်ကေမန်ကျွန်းများနှင့်လည်းနိုင်ငံတကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ ကေမန်ကျွန်းရှိ Professional CFA များ၊ ကေမန်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကေမန်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ ကေမန်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများ၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကေမန်ကျွန်းများနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများမှတစ် ဦး ချင်းအခွန်ပေးဆောင်သူများအတွက်ကမန်ကျွန်းစုတွင်ကြီးမားသောအစုစုကိုစီမံသည်။
Cayman ကျွန်းများရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ကမန်ကျွန်းများရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ကေမန်ကျွန်းများနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းတို့နှင့်ဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
ကေမန်ကျွန်းစုရှိလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ ဂျော့ခ်ျတောင်းမြို့ရှိစီးပွားရေးဝန်ဆောင်မှုများ
ကေမန်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကမန်ကျွန်းများရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကော်မန်ကျွန်းစုရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ၊ ကေမန်ကျွန်းစုရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကော်မန်ကျွန်းများရှိကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ကမန်ကျွန်းများတွင်ကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ကေးမန်ကျွန်းရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ Cayman Islands တွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကဲမန်ကျွန်းစုရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကမန်ကျွန်းများရှိကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ကမန်ကျွန်းများတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကေးမန်ကျွန်းစုရှိကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကေးမန်ကျွန်းစုရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများ၊
ကေမန်ကျွန်းစုရှိစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ | ဂျော့တောင်းမြို့ရှိစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ
Cayman ကျွန်းများနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် Cayman Islands တွင် Corporate Bank Account ဖွင့်ပါ။
သင်၏ကုမ္ပဏီ Cayman ကျွန်းတွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် ကေမန်ကျွန်းစု.
သင်၏ကုမ္ပဏီသည်သင် outsource လုပ်ပေးသော Cayman ကျွန်းများတွင်ပါဝင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို Cayman ကျွန်းများမှာ။
Cayman Islands တွင်ရောင်းရန်ရှိသောစီးပွားရေး
HR အတိုင်ပင်ခံ Cayman ကျွန်းများတွင်သင်၏ထောက်ပံ့မှုသည်သင်၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ပိုးများကိုဝန်ထုတ်။ သင့်အား Cayman Islands တွင်စုဆောင်းနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ Cayman Islands တွင်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ ကေမန်ကျွန်းနှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းကေမန်ကျွန်းစုများတွင် "
Cayman Islands တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်း
Cayman ကျွန်းများတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ကေမန်ကျွန်းစု.
ကေမန်ကျွန်းစုရှိ Cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ်အီးယူတရားစီရင်မှုများအတွက်ကေမန်ကျွန်းစုမှ။
ကေမန်ကျွန်းစုရှိ CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ ကေမန်ကျွန်းစုရှိအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပါအဝင်သင်၏ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကေမန်ကျွန်းများတွင်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - ကေမန်ကျွန်းစုအတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် Cayman Islands ရှိ Business VoIP အပါအဝင် Cayman Islands ရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းချက်များ Cayman Islands ရှိလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံရှိကမန်ကျွန်းစုမှဖြစ်သည်
Cayman ကျွန်းများတွင် Website တည်ဆောက်ခြင်း
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ကေမန်ကျွန်းစု Cayman Islands တွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
Cayman Islands ရှိ Software Development Company
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကေမန်ကျွန်းစုCayman Islands တွင် CryptoCurrency Software များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Cayman Islands တွင် App တည်ဆောက်ခြင်း။
Cayman ကျွန်းများအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသော Software Development | Cayman ကျွန်းများရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
တစ် ဦး ချင်း၊ စတင်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းစီ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ကမန်ကျွန်းများတွင်မြန်ဆန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုနှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်မှုနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်ကေမန်ကျွန်းစုတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်အတွက်ရှာဖွေနေ Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏ကြိုက်နှစ်သက်သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်နေရာကိုထည့်သွင်းရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်၎င်းတို့ကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းရိုးသားခြင်းတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကကမန်ကျွန်းများတွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကေမန်ကျွန်းစုတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ကမန်ကျွန်းရှိရှယ်ယာများဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ရှိနိုင်ငံခြားသားများကိုကူမန်ကျွန်းများတွင်အစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ကေးမန်ကျွန်းများတွင်အစုရှယ်ယာပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်လီမိတက်ကုမ္ပဏီ၊ ရှယ်ယာဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက် Cayman Islands, အစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ Cayman ကျွန်းများတွင်အစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အစုရှယ်ယာများဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် Cayman Islands Company Limited အစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Cayman Islands Company Limited မှအစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Cayman Islands Company Limited မှအစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်ကိုင်မန်းကျွန်းကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ကေမန်ကျွန်းကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
Cayman Islands တွင်အစုရှယ်ယာထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကိုအထောက်အပံ့
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ကေမန်ကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်၊ Cayman Islands မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Cayman Islands မှ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ကေမန်ကျွန်းစုများမှကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသောမြို့များမှာ - ဂျော့တောင်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျော့ခ်ျမြို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျော့ခ်ျမြို့မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျော့ခ်ျမြို့မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျော့ချ်မြို့မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Cayman Islands တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | ဂျော့တောင်းတွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကေမန်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းသည်ကေမန်ကျွန်းစုရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကေမန်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအေးဂျင့်များနှင့်ကေမန်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များမှဂျော့တောင်းရှိမြို့ကြီးများရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ George Town ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ George Town ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ George Town ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ George Town ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ George Town ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
Cayman Islands တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း George Town တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ
Cayman ကျွန်းများရှိတတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ကေးမန်းကျွန်းစုမှာကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ကေမန်ကျွန်းစုမှာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ကေမန်ကျွန်းများမှာကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကေမန်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ဂျော့တောင်းရှိဂျော့တောင်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဂျော့တောင်းရှိဂျော့တောင်းတွင်ရှိသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဂျော့တောင်းရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊
Cayman Islands တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း George Town တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်း
Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါသလား။
Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ဂျော့တောင်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ဂျော့တောင်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်၊ ဂျော့ခ်ျတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ဂျော့ခ်ျမြို့ရှိ setup ကုမ္ပဏီ၊
Cayman ကျွန်းများတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ ဂျော့တောင်းတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရရှိသည်
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည် Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။
Cayman ကျွန်းများတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Cayman Islands တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Cayman Islands တွင်နိုင်ငံခြားသားဘဏ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားများအားမြို့တော်၌မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအဝင်၊ ကမန်ကျွန်းများတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားသားအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ George Town တွင်နေထိုင်သူ၊ George Town တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက် George Town တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Cayman Islands | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ George Town
Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအဘယ်နည်း။
Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုမ္မဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုမ္မဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စရိတ်၊ Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကုန်ကျမှုКайманကျွန်းများတွင်ကုမ္မဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်ကမန်ကျွန်းများတွင်ကုမ္ဗဏီများကုမ္မဏီကုန်ကျမှု
Cayman ကျွန်းရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး ဂျော့တောင်းတွင်စျေးသက်သာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
Cayman Islands တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဘယ်လိုတည်ထောင်နိုင်ပါသလဲ။
Cayman Islands တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်သို့မဟုတ် Cayman Islands တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Cayman Islands တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန် Cayman Islands တွင်လိုအပ်ချက်အချို့ရှိသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
ဟုတ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမန်ကျွန်းသားများနှင့် Cayman Islands Company မှအစုရှယ်ယာများဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများ၊ ကမန်ကျွန်းရှိအစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ကေမန်ကျွန်းများတွင်အစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ကေးမန်ကျွန်းစုတွင်အစုရှယ်ယာများဖွဲ့စည်းသည့်ကုမ္ပဏီလီမိတက် အစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အစုရှယ်ယာဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်ကိုင်မန်ကျွန်းများကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ကိုင်မန်းကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ကိုင်မန်ကျွန်းများတွင်အစုရှယ်ယာဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ကေးမန်ကျွန်းများတွင်အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်ခြင်းဖြင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ကေဒါကျွန်းများ၊ Cayman ကျွန်းများတွင်အစုရှယ်ယာထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်။
Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။
Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ သို့မဟုတ် Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းတို့အကြားကွာခြားမှုမရှိကြောင်းအသုံးပြုသူများကမေးလေ့ရှိသောဤအခြေခံမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အတွက်၎င်းတို့သည်မတူကွဲပြားသောစကားလုံးများဖြစ်သည်။
ကမန်ကျွန်းစုရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများ Cayman Islands တွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Cayman Islands တွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်သည်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ကေးမန်ကျွန်း၌သင်၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ (သို့) ကေမန်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသုံးရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကေမန်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ကူမန်ကျွန်းစုရှိကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောပမာဏနှင့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းကိုင်များကြောင့်ကမန်ကျွန်းများတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Cayman ကျွန်းများရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကသင့်အား Cayman Islands တွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ကမန်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ရရှိနိုင်သောစာရင်းကိုင်များ ကေမန်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကေမန်ကျွန်းစုရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Cayman ကျွန်းများတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားအား George Town တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အထူးအထောက်အပံ့ပေးပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပြီး Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လိုလျှင်သင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည်။
ယနေ့ Cayman ကျွန်း၌ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ!
Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါကသို့မဟုတ် Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Cayman Islands, Cayman Islands တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းသည် George Town တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် George Town တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် George Town တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် George Town တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဂျော့ခ်ျတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ Town မြို့သည် George Town တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊ George Town တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း။
Cayman Islands တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု ဂျော့တောင်းတွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
ကေမန်ကျွန်းစုအစိုးရ ၀ ဘ်ဆိုဒ် - www.gov.ky
လွှတ်တော်ဆိုက် - www.legislativeassembly.ky
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန - www.immigration.gov.ky
အကောက်ခွန် ဦး စီးဌာန - www.caymanislandscustoms.com
တိုင်ကြားမှုကော်မရှင်နာရုံး - www.occ.gov.ky
ကေမန်ကျွန်းစုရေအာဏာပိုင် - www.waterauthority.ky
စီမံကိန်းရုံး - www.planning.gov.ky
CI ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း - www.cishipping.com
ပတ်ဝန်းကျင် ဦး စီးဌာန - www.doe.ky
သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် - www.foi.gov.ky
မြေယာနှင့်စစ်တမ်း - www.caymanlandinfo.ky
အမျိုးသမီးအရင်းအမြစ်စင်တာ - www.wrc.gov.ky
သဘာဝခရီးသွားလုပ်ငန်း - www.naturecayman.com
ကေမန်ကျွန်းစုတက္ကသိုလ်ကောလိပ် - www.ucci.edu.ky
JGHS ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီအစဉ် - www.johngrayrecyclers.org
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဦး စီးဌာန - www.caymanislands.ky
ညီအစ်မကျွန်းခရီးသွားလုပ်ငန်း - www.itsyourstoexplore.com
Cayman Brac ၏ပျောက်ဆုံးနေသော Atlantis City - www.atlantiscaymanbrac.com
စီးပွားရေးကုန်သည်ကြီးများအသင်း - www.caymanchamber.ky
အသေးစားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုယူနစ် - www.investcayman.gov.ky
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအေဂျင်စီ - http://www.epa.gov
Cainvest Bank နှင့် Trust Limited
Fidelity Bank (ကေမန်) လီမိတက်
Queensgate Bank နှင့် Trust Company Ltd.
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ကေမန်ကျွန်းစုရှိငွေကြေးခ ၀ ါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတို့ကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုမထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ ကေမန်ကျွန်းစု အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●ကေမန်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူ၊ လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●ကေမန်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်ကေမန်ကျွန်းများသို့ (သို့) ကုန်းမန်းသို့စက်မှုလုပ်ငန်းထောက်လှမ်းရေးအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိပါ။
●ကေမန်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားမ ၀ င်ရာဇ ၀ တ်မှုသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်အနက်ရောင်စာရင်း ၀ င်ကာမန်ကျွန်းများဥပဒေအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ကေမန်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတစ် ဦး ချင်းစီ (သို့) ကေမန်ကျွန်းများသို့ ၀ င်သို့မဟုတ်က ၀ င ်၍ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ကေမန်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ကဲမန်ကျွန်းစုများမှသို့မဟုတ်သို့သွားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဓာတုပစ္စည်းများကိုစက်ရုံများအပါအ ၀ င်၊ ကိုင်မန်ကျွန်းများမှကနေဒါကျွန်းစုမှကုမ္ပဏီများသို့လည်းကောင်း၊ မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများ (s) ကိုထုတ်လုပ်, ကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးဖို့အသုံးပြုပစ္စည်းကိရိယာများ။
●ကမန်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါပစ္စည်းများကိုကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းအတွက်ဖြစ်စေကေမန်ကျွန်းများသို့ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●မွေးစားမိဘများလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်ကနေဒါကျွန်းများမှသို့မဟုတ်ကနေကျွန်းများသို့အငြင်းပွားမှုအပါအ ၀ င်လူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုအပါအ ၀ င်မွေးစားခြင်းအေဂျင်စီများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမထားသည့်ကေမန်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ။
●ကေမန်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဆက်သွယ်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးသာသနာရေးနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်ကိုင်မန်းကျွန်းစုများမှသို့မဟုတ်သို့ ၀ င်ရောက်လာခြင်းမရှိပါ။
●ကေမန်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူတစ် ဦး ချင်းစီ (သို့) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအခြေပြုကေမန်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးမထားဘူး။
●ကေမန်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်သို့မဟုတ်ကေမန်ကျွန်းများသို့၎င်း၊
●ကေမန်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဆက်သွယ်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောကမန်ကျွန်းများသို့သို့မဟုတ်ရှိကမန်ကျွန်းများသို့ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် ကေမန်ကျွန်းစုတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် ကေမန်ကျွန်းစု, ကေမန်ကျွန်းစု ဘဏ်အကောင့်, ကေမန်ကျွန်းစု ယုံကြည်မှု ကေမန်ကျွန်းစု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု ကေမန်ကျွန်းစု။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ Cayman ကျွန်းများအတွက်
အခမဲ့တိုင်ပင်တောင်းဆိုခြင်း Cayman ကျွန်းများအတွက်
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-cayman-islands-cl/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-cayman-islands-cl/